8 Jehova wee gwa Mozis, sị:
2 “Kpọrọ Erọn, ya na ụmụ ya,+ werekwa uwe+ ha na mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ,+ kpụrụkwa oké ehi àjà mmehie+ na ebule abụọ, burukwa nkata achịcha na-ekoghị eko,+
3 meekwa ka mmadụ niile zukọta+ n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.”+
4 Mozis wee mee nnọọ dị ka Jehova nyere ya n’iwu, mmadụ niile wee zukọta n’ọnụ ụzọ+ ụlọikwuu nzute.
5 Mozis wee gwa nzukọ ahụ, sị: “Nke a bụ ihe Jehova nyere iwu ka e mee.”+
6 Mozis wee kpọta Erọn na ụmụ ya nso were mmiri+ saa ha ahụ́.+
7 Mgbe nke ahụ gasịrị, o yiwere ya uwe mwụda+ ma kee ya ákwà n’úkwù,+ yiwekwa ya uwe elu nke na-enweghị aka,+ yiwekwa ya efọd,+ werekwa eriri+ efọd ahụ kegide ya n’ahụ́.
8 Mgbe ahụ, o kekwasịrị ya akpa obi+ ma tinye Yurim na Tọmịm+ n’akpa obi ahụ.
9 O wee kee ya ákwà a na-eke n’isi+ n’isi ma tinye n’ihu ákwà ahụ a na-eke n’isi mbadamba ihe na-egbuke egbuke nke e ji ọlaedo mee, bụ́ ihe àmà dị nsọ nke nraranye,+ dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
10 Mozis wee were mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ tee ụlọikwuu ahụ+ na ihe niile dị n’ime ya wee doo ha nsọ.
11 Mgbe o mesịrị, o fesara ụfọdụ n’ime ya n’ebe ịchụàjà ugboro asaa ma tee ebe ịchụàjà+ na arịa ya niile na efere ya nakwa ebe a na-adọkwasị ya mmanụ, iji doo ha nsọ.
12 N’ikpeazụ, ọ wụsara ụfọdụ n’ime mmanụ ahụ e ji ete mmadụ mmanụ n’isi Erọn wee tee ya mmanụ iji doo ya nsọ.+
13 Mozis wee kpọta ụmụ Erọn nso+ yiwe ha uwe mwụda ma kee ha ákwà n’úkwù,+ fụọkwa ha ákwà a na-afụ n’isi,+ dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
14 O wee kpụta oké ehi+ àjà mmehie ahụ, Erọn na ụmụ ya wee bikwasị aka ha n’isi+ oké ehi àjà mmehie ahụ.
15 Mozis wee gbuo ya,+ were ọbara ya+ ma jiri mkpịsị aka ya tee ya na mpi ebe ịchụàjà ahụ gburugburu wee sachapụ ebe ịchụàjà ahụ mmehie, ma ọ wụsara nke fọdụrụ n’ọbara ahụ n’ala ebe ịchụàjà ahụ, ka o wee doo ya nsọ maka ikpuchi mmehie+ n’elu ya.
16 E mesịa, o weere abụba niile dị n’elu eriri afọ ya na abụba dị n’elu imeju ya, tinyere akụrụ ya abụọ na abụba ha, Mozis wee suree ha n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà.+
17 O wee mee ka a kpọọ oké ehi ahụ na akpụkpọ ya na anụ ya na nsị ya ọkụ ná mpụga ebe ha mara ụlọikwuu,+ dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
18 O wee kpụta ebule àjà nsure ọkụ ahụ nso, Erọn na ụmụ ya wee bikwasị aka ha n’isi ebule ahụ.+
19 Mozis wee gbuo ya ma fesa ọbara ya gburugburu n’elu ebe ịchụàjà.+
20 O wee bọrisie ebule ahụ,+ Mozis wee suree isi ya na akụkụ ya dị iche iche na abụba ya n’ọkụ.
21 O wee jiri mmiri saa eriri afọ ya na ụkwụ ya, Mozis wee suree ebule ahụ dum n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà.+ Ọ bụ àjà a na-esure n’ọkụ ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ.+ Ọ bụ àjà a na-esure n’ọkụ nye Jehova, dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
22 O wee kpụta ebule nke abụọ nso, bụ́ ebule e ji ahọpụta mmadụ,+ Erọn na ụmụ ya wee bikwasị aka ha n’isi ebule ahụ.
23 Mozis wee gbuo ya wee were ọbara ya tee n’ọnụ ọnụ ntị aka nri Erọn nakwa ná mkpịsị aka ukwu nke aka nri ya nakwa ná mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ya.+
24 Mozis wee kpọta ụmụ Erọn nso wee tee ọbara ahụ n’ọnụ ọnụ ntị aka nri ha nakwa ná mkpịsị aka ukwu nke aka nri ha nakwa ná mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ha; ma Mozis fesara nke fọdụrụ n’ọbara ahụ gburugburu n’elu ebe ịchụàjà.+
25 O wee were abụba ya na ọdụ ya nke bụ́ abụba abụba na abụba niile dị n’elu eriri afọ ya+ na abụba dị n’elu imeju ya, tinyere akụrụ ya abụọ na abụba ha na ụkwụ aka nri ya.+
26 O sikwa na nkata achịcha na-ekoghị eko nke dị n’ihu Jehova were otu achịcha na-ekoghị eko+ na otu achịcha e tinyere mmanụ+ na otu achịcha dị fere fere.+ O wee tụkwasị ha n’elu abụba ndị ahụ na ụkwụ aka nri anụ ahụ.
27 E mesịa, o tinyere ha niile n’ọbụ aka Erọn nakwa n’ọbụ aka ụmụ ya wee malite ifegharị ha ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova.+
28 Mozis wee si n’ọbụ aka ha were ha suree n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà, n’elu àjà nsure ọkụ ahụ.+ Ọ bụ àjà e ji ahọpụta mmadụ,+ nke a chụrụ ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ.+ Ọ bụ àjà a na-esure n’ọkụ nye Jehova.+
29 Mozis wee were obi anụ ahụ,+ fegharịa ya ka ọ bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova.+ Ọ ghọrọ òkè Mozis n’ebule ahụ e ji ahọpụta mmadụ,+ dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
30 Mgbe e mesịrị, Mozis weretụụrụ mmanụ ahụ e ji ete mmadụ mmanụ+ na ọbara dị n’elu ebe ịchụàjà ahụ fesa Erọn, fesakwa uwe ya, fesa ụmụ ya, fesakwa uwe ụmụ ya ndị ya na ha nọ. O wee si otú a doo Erọn na uwe ya nsọ,+ dookwa ụmụ ya na uwe ụmụ+ ya ndị ya na ha nọ nsọ.
31 Mozis wee gwa Erọn na ụmụ ya, sị: “Sienụ+ anụ ahụ n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, ọ bụkwa n’ebe ahụ ka unu ga-anọ rie ya+ na achịcha nke dị na nkata e ji ahọpụta mmadụ, dị ka e nyere m n’iwu, sị, ‘Erọn na ụmụ ya ga-eri ya.’
32 Unu ga-akpọ ihe fọdụrụ n’anụ ahụ nakwa n’achịcha ahụ ọkụ.+
33 Unu esila n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute pụọ ruo ụbọchị asaa,+ ruo mgbe ụbọchị e ji ahọpụta unu zuru, n’ihi na ọ ga-ewe ụbọchị asaa iji nye unu ikike.+
34 Dị nnọọ ka e mere taa, otú a ka Jehova nyere iwu ka e mee iji kpuchiere unu mmehie.+
35 Unu ga-anọkwa n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute ehihie na abalị ruo ụbọchị asaa,+ unu ga-echerịrị nche ahụ Jehova nyere n’iwu,+ ka unu ghara ịnwụ; n’ihi na otú a ka e nyere m n’iwu.”
36 Erọn na ụmụ ya wee mee ihe niile Jehova nyere n’iwu site n’ọnụ Mozis.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D3%26Chapter%3D8%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl